Global Voices teny Malagasy » Tsy tian’ny mpitondra fahefana ity fanazavana an-tsary mampiseho ny tokony hanitsiana ny lalàna fanimbazimbana ny mpanjaka ao Thailandy ity · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Novambra 2015 6:30 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Thailandy, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika
Misy fanazavana an-tsary iray navoakan'ny  tranonkalam-baovao iray Prachatai mamehy ireo tranga Lese Majeste (fanimbazimbana ny mpanjaka) niseho tao anatin'ny taona vitsivitsy tao Thailandy nanaitra ny fifantohan'ny fitondra-miaramila tao amin'ny firenena, ka naniraka  manamboninahitra 10 avy hatrany hanadihady ny toniam-baovao amin'ny teny anglisy an'io tranonkala io avy hatrany.
Ankilan'ny fanasongadinana ny halavan'ny fotoana fanagadrana  miaraka amin'ny fiampangana misy Lese Majeste, dia asehon'ny fanazavana an-tsary ihany koa ny fomba mety hampigadra ny olona heverina ho tsy manao na inona na inona akory ho fanafintohinana .
Ny lalànan'ny Lese Majeste ao Thailandy, na ny Andininy faha-112 amin'ny Ady Heloka Bevava, dia heverin'ny maro amin'ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona ho iray amin'ny henjana indrindra  eto ambonin'ny tany sady efa lany andro tanteraka. Efa taona maro izay ny mpampianatra sekoly ambony sy ny mpikatroka no efa nanao fanangona-tsonia ho an'ny governemanta hanavaozana ity lalàna ity.
Nandritra ny fotoana nandrombahan'ny tafika ny fahefana tamin'ny 2014, dia niakatra tampoka ny isan'ny raharaha mifandraika amin'ny Lese Majeste, izay mahatonga ny sasany hanondro  ny teti-panoron'ny governemanta hampiasa ny lalàna ho fampanginana ny mpitsikera sy ireo mpitariky ny mpanohitra. Mbola nitohy ihany izany fironana izany na dia efa napetraka aza ny governemanta sivily notendren'ny miaramila.
Ilay fanazavana an-tsary dia nivoaka tao amin'ny lahatsoratra iray izay mifandrohy  amn'ny raharahan'ny  Lese Majeste manokana. Ohatra, ny laharana voalohany ao amin'ny fanazavana an-tsary dia manondro ilay mpitendry mozika iray nosamborina noho ny fanoratana graffiti  mamely ny mpanjaka tao amin'ny efitra fandroan'ny tsenambarotra iray. Laharana faharoa indray miresaka tantara an-tsangana  tao amin'ny oniversite izay ‘nanopa’ ny mpanjaka.
Saingy ny tranga Lese Majeste malaza indrindra dia ny laharana fahavalo ao amin'ny fanazavana an-tsary, izay manondro ilay olompirenena zokiolona iray izay nosamborina fa nandefa SMS iray heverina ho manohintohina ny fitondranm-panjaka tokana. Niteraka tsikera mamaivay sy adihevitra henjana ny didy fanagadrana azy 20 taona sy ny fahafatesany  raha mbola tany am-ponja, tsy tao amin'ny fireneny tao Thailandy ihany fa tany amin'ny firenenkafa maro hafa ihany koa.
Thaweeporn Kummetha no mpanao gazety farany indrindra nampanantsoin'ny  tafika noho ny famoahana lahatsoratra izay heverina ho manimba ny filaminam-bahoaka na manopa ny fitondra-mpanjaka tokana. Tsy misy ny vesatra iampangana an'i Thaweeporn Kummetha, saingy namepetra  ny Prachatai ny tafika mba hitandrina bebe kokoa amin'ny famoahana lahatsoratra izay mety hiteraka fisavoritahana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/11/19/76855/
 ny halavan'ny fotoana fanagadrana: https://globalvoices.org/2015/06/20/how-a-facebook-user-in-thailand-was-sentenced-to-50-years-in-jail-for-defaming-the-monarchy/
 henjana indrindra: https://globalvoices.org/2012/02/12/thailand-reform-the-worlds-harshest-lese-majeste-law/
 tantara an-tsangana: http://www.prachatai.com/english/node/4643